ट्रम्प-किम दोस्रो शिखर वार्ताको दोस्रो दिन, यसरी सुरु भएको छ वार्ता – Everest Dainik – News from Nepal
ट्रम्प-किम दोस्रो शिखर वार्ताको दोस्रो दिन, यसरी सुरु भएको छ वार्ता
काठमाडौँ, फागुन १६। अमेरकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेत किम जङ-अनले भियतनाममा दोस्रो दिनको वार्ता थालेका छन्। यो वार्तामा उनीहरूबीच उत्तर कोरियाको परमाणुअस्त्र परित्यागबारे महत्त्वपूर्ण छलफल हुने बताइएको छ।
वार्ताअघि किमको उपस्थितिमा ट्रम्पले भनेका थिए, “हतार छैन। हामी उचित सम्झौता गर्न चाहन्छौँ।”
किमले चाहिँ आफूलाई “राम्रो परिणाम” आउने लागेको बताएका थिए।
किन दोस्रो शिखरवार्ता?
किमसँगको वार्ताअघि ट्रम्पले पहिलो वार्ताको प्रगतिबारे व्यक्त भएका निराशातिर सङ्केत गर्दै भने, “मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु कि गति मेरा लागि त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। पारमाणविक रकेट, क्षेप्यास्त्र आदिको परीक्षण नगरे म त्यसको प्रशंसा गर्छु।”
किमप्रति आफ्नो “ठूलो सम्मान” रहेको र आफूहरूबीच रहेको सम्बन्ध “धेरै बलियो” रहेको उनले बताएका छन्।
के भने किम र ट्रम्पले?
वार्ताको सम्भावित परिणामबारे एक विदेशी पत्रकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै किमले भने, “अहिले नै भन्न चाँडो हुन्छ तर मलाई भित्रदेखि नै राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने लागेको छ।”
तर उनले “परमाणुपरित्याग”का लागि आफू तयार नभएको भए “अहिले म यहाँ हुन्नथेँ” भन्ने प्रतिक्रिया दिए।
किमको उत्तर आउनासाथ ट्रम्पले भने, “यो तपाईँहरूले सुन्नुभएको सम्भवत: सबैभन्दा राम्रो उत्तर हो।”
किमले यसरी विदेशी पत्रकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिए ।
विश्लेषकहरूका अनुसार किमले केलाई “परमाणुपरित्याग” भनेका हुन् त्यो चाहिँ स्पष्ट छैन।
के उत्तर कोरियाले प्योङ्याङमा अमेरिकालाई आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोल्न अनुमति दिन्छ भन्ने प्रश्नमा आफू सकारात्मक भएको उत्तर दिए।
ट्रम्पले पनि त्यसमा प्रतिक्रिया दिँदै दुईतर्फ नै त्यसो हुन सक्ने सङ्केत दिए।
दुई देशबीच सम्वादका लागि कुनै सोझो बाटो छैन। सम्पर्ककार्यालयको स्थापना सम्बन्ध सुधारको पहिलो पाइला हुन सक्छ।
युद्ध हुने धम्की दिँदै आएका दुई नेताहरू सन् २०१७ को अन्तिमतिर एकअर्काको आलोचना गरेका थिए।
उत्तर कोरियाले गर्दै आएको अस्त्रपरीक्षणप्रति कटाक्ष गर्दै ट्रम्पले किमलाई “रकेट पुरुष” भनेका थिए भने किमले ट्र्म्पलाई “मानसिक स्थिति बिग्रिएको बूढो” भनेका थिए।
ट्याग्स: Korean Nuke talks, Trump-Kim second summit, US- Nrth Korea talks, vietnam